Wasaaradda caafimaadka oo ka warbixisay Xaaladahii ugu dambeeyay ee Coronavirus | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Wasaaradda caafimaadka oo ka warbixisay Xaaladahii ugu dambeeyay ee Coronavirus
Wasaaradda caafimaadka oo ka warbixisay Xaaladahii ugu dambeeyay ee Coronavirus
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada dowladda Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa shacabka Soomaaliyeed kula wadaagtay warbixinteeda maalinlaha ah ee ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka Coronavirus ee dalka.
Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Feyruska Karoona waxay ku sheegtay in labadii maalin ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyay 69 xaalado cusub oo COVID-19 ah, 4 bukaan ay u geeriyoodeen xanuunka 4 ruux oo kalana ay ka bogsoodeen.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobalka Banaadir (39) Somaliland (11) Puntiland, (8), Koonfur Galbeed (8) ruux, Hirshabeelle (2) iyo Galmudug (Hal) ruux.
48 kamid ah bukaannada cusub waa rag 21-na waa haween. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 997 guud ahaan, 48 bukaan ayaa u geeriyooday cudurka, waxaana bogsootay 110 ruux.
Wasiir Fowziya Abiikar Nuur waxay ku celisay inay muhiim tahay qaadashada talooyinka caafimaad ee laga helayo khuburada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyi gelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkaan uu dadka ku keeni karo.